Tonga lafatra ny trano refurbish ao amin' ny Buenavista!!
Any an-tranoTonga lafatra ny trano refurbish ao amin' ny Buenavista!!
Be dia Be ny Habeny186 m²
MpifanolobodirindrinaBuenavista i del Norte
KarazanaFirenena Trano, Tranon'
Amidy: Tena tsara trano refurbish in Buenavista, Tenerife !!
Perfect toerana manodidina araka ny toetsika amin'ny 360º hevitra, ny vato krystaly rivotra madio sy ny filaminana tanteraka. Vao dingana vitsy niala teo amin'ny fiangonana, iray amin'ireo tsara indrindra indrindra any amin'ny faritra sy ny tsara tarehy indrindra mandeha lalana ny nosy - Monte do Agua !!
Ny fananana tena ahitana ny trano eo amin'ny toe-javatra ara-drafitra tsara (tsy mila fanamboarana lehibe) sy fanorenana roa tany am-boalohany ny vato voajanahary amin'ny tafo hazo izay azo nivadika ho garazy sy mahaleo tena misaraka trano.
Ny fananana manana herinaratra, canalisation sy ny rano madio avy amin'ny paompy! Azo atao amin'ny fiara sy fitaovana amin'ny toerana fiantsonan'ny na garazy.
Dia tsy hahita trano faharoa tahaka izany ho toy izany vidiny ambany!
Huge finca amin'ny Winery, Villa sy ny soavaly tranon
Buenavista do Norte, Buenavista do Norte
fizarana voalohany € 250.000 . Total vidiny € 975,000
Be dia Be ny Habeny48000 m²
Trano malalaka + finca akaikin'i Buenavista Golf!
Be dia Be ny Habeny900 m²
Big trano miaraka amin'ny fomba fijery manakaiky Panoramika Buenavista Golf
Be dia Be ny Habeny221 m²